အိန္ဒိယ: သေဆုံး: မိန်းကလေးတစ်ဦး5နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးခြေထောက်သေနတ်သူကိုအကြမ်းဖက်သမား J & K သည် | အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "အိန္ဒိယ: သေဆုံး: မိန်းကလေးတစ်ဦး5နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးခြေထောက်သေနတ်သူကိုအကြမ်းဖက်သမား J & K သည် | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: သေဆုံး: မိန်းကလေးတစ်ဦး5နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးခြေထောက်သေနတ်သူကိုအကြမ်းဖက်သမား J & K သည် | အိန္ဒိယသတင်း
Srinagar: လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကဗုဒ္ဓဟူးနေ့အပေါ်တစ်ဦး "အကြီးတန်းအရာရှိတဦးက" ပစ်သတ် Lashkar-e-Taiba ရာသူတို့တစ်တွေငါးနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးခြေထောက်မှာသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အတွက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏စီးပွားရေးအရအဘိုးကိုချွတ်ပိတ်လိုက်သည်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစောင့်ရှောက်ဖို့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အာဏာရှင်တွေနားမထောင်ခဲ့ကြလို့ပဲ။
Baramulla ခရိုင် Asif ထို့ကြောင့် Bhat ၏မြို့တစ် hideout ဦးသေဆုံးခဲ့သည် Sopore လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကထောက်လှမ်းရေးအစီရင်ခံစာများအပေါ် အခြေခံ. buckled ခဲ့ကွောငျး, အရာရှိများပြောသည်။ Asif အဖွဲ့ထအပေါ်လက်၌လက်ပစ်ဗုံးပစ်တဲ့အခါမှာနှစ်ဦးကိုရဲဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
Jammu နှင့်ကက်ရှမီးယား၏ DGP Dilbagh Singh က ကွပ်မျက်အကြမ်းဖက်ပုံမှန်ပြန်လည်ကာကွယ်တားဆီးဖို့သူ့အဖွဲ့၏မဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်၎င်းတို့၏စတိုးဆိုင်ပိတ်ဖို့ရန်ကက်ရှမီးယားမြောက်ဘက်ဈေးရောင်းခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
45 ကီလိုမီတာအကြောင်းကို Sopore အတွက် Dangerpora မှာလိုက်စားအသီးကုန်သည်များ၏မိသားစုအပေါ်တိုက်ခိုက်မှု, Srinagar တင်သွင်းခဲ့တဲ့ကတင်ပြရန်, အခြားသူများတွှေဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ Singh ကပြောခဲ့သည်။ မိန်းကလေးအပြင်နှစ်ခုကတခြားမိသားစုဝင်တွေတိုက်ခိုက်မှုအတွက်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
Lashkar ရှစ်အဖွဲ့ဝင်များကသူတို့ပုံနှိပ်ခြင်း၏တာဝန်နှင့်သူတို့ကိုအပ်နှင်းခြင်းနှင့်ပုံမှန်ဘဝဆန့်ကျင်ကလူသတိပေးပိုစတာများဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောသည်ရက်အနည်းငယ်အကြာဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖမ်းခံရယောက်ျားကိုလည်းသူတို့ Asif နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းထင်ရှားနှင့်သူ၏အပေါင်းအသင်းနှစ်ခုရှိသည်ဟု alias ကို Sajjad Hyder နှင့် Mudasir ပန်ဒစ်ဟာ DGP ကဆိုသည်။
၏အကြမ်းဖက်သမားများ Hizbul မူဂျာဟီဒင် ဒါ့အပြင်ပိုစတာတွင်ဖော်ပြထားသောအချိန်ဇယား၏အတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်. မကုန်သည်များနှင့်ဝယ်လက်မေးတယ်။ လူငယ်တစ်ဦးမျက်နှာဖုံးလူကို Bhagat Chowk အနီးရှိလမ်းအလယ်၌ထင်ရှားအသွားအလာနှောင့်အယှက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည့်အခါ "ငါကဒီနေ့လယ် Srinagar မောင်းနှင်ခဲ့သည်။ ငါကရှောင်မှစီမံခန့်ခွဲ, "Mukhtar အာမက် Dar, Channapora ဒေသနေထိုင်သူတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
ဒူလ် Ghaffar Khan က Pulwama သူစစ်သွေးကြွယခုပုဂ္ဂလိကကားများရပ်တန့်က "ကိုကြား" ဟုဆိုသည်နှင့်အိမ်ပြန်ဖို့ဒရိုင်ဘာကိုမေးခဲ့တယ်။ "တောင်သူလယ်သမားအသီးကိုဥယျာဉ်ခြံရိတ်မှမမေးမလျှောက်ကြပြီ" ဟုသူကဆက်ပြောသည်။
Cisco သည် 10e စက်မှုတော်လှန်ရေးများအတွက်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန် $34 နှစ်ပေါင်းသန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်
နိုင်ငံတော် Apply ဒါမှမဟုတ်အယ်လ်ဂျီယားသဘောတူညီချက်ပြန်ဖတ်ရပါမည်: အဆိုပါ CMA, အ MSA ကို, အ MPR GATIA နှင့်စားပွဲပတ်လည်